Barreessa irratti Barbaaduuf Baakka Buusu - LibreOffice Help
1 Qaqaa Barbaadii Baakka Buusi
1.1 Barruu barbaaduuf
1.2 Barruu bakka buusuu
1.3 Akkaataalee barbaaduf
1.4 Dhangiiwwan barbaaduuf
1.5 Dirqala Dabalaa
Sanduuqa barruu keessaa Barbaadi barbaachuf barruu galchi.
Yammuu ati Bakkabuusi cuqaastu, Barreessaan barruudhaaf sanduuqa Barbaadi keessaa bakka qaree ammaatii ka'uudhan galmee hunda keessa barbaada. Yommuu barruun argamuu, Barreessaan barrichaa shoolessee deebii kee eeggata. Barruu shoolame kan galmee barruu sanduuqa barruu Dhaan bakkabuusi dhaan bakka buusuuf Bakka buusi cuqaasi. Filannoo ammaa osoo bakka hin buusiniin dura, gara barruu argame itti aanuutti deemuudhaaf, Barbaadi cuqaasi.
Barbaacha akkaataaleef mirkanneesa.
Kan Kanaaf Barbaadu sanduuqni barruu ammaa sanduuqa tarreeti, yommuu Akkaatee keewwataa kannen galmee ammee keessatti fayyadan filachuu dandeessu.
Retrieved from "https://help.libreoffice.org/index.php?title=4.4/Writer/Finding_and_Replacing_in_Writer/om&oldid=1085844"